Kugadziriswa kwekuchengetedza senzira yakakosha muCommerce | ECommerce nhau
Kugadziriswa kwekuchengetedza sechinhu chakakomba muCommerce
Apo patinotaura nezvazvo eCommerce isu tinofunga nezvemapeji ewebhu, masystem ekubhadhara, nguva dzekuendesa uye mutengo, kushandira vatengi uye kushambadzira kwepamhepo. Zvinonzwisisika, zvitoro zvakawanda zvepamhepo zvinokanganwa poindi yakakosha inogona kuchinja maitiro ebhizinesi ravo: iyo kuchengetedza zvinhu.
Logistics yekuchengetera chidimbu chakakosha mune zvese zviri muCommerce network. Uye kana zvisina kudaro, regai vaudze makambani akaita seAmazon. Iyi eCommerce hofori yaisazove chinhu dai isiri yayo logistics system. Uye kana zvitoro zvakawanda zvepamhepo zvikatadza kana kusabatsira, imhaka yekuti vanotadza kuchengeta nekutarisira masheya, kana nekuti chinhu ichi chinopedzisira chadya purofiti yavo.
Una online store iwe unofanirwa kuziva kuti ucha chengeta sei chigadzirwa chako. Asi hazvisi zvekungounganidza chigadzirwa, asi nezve kuzviisa nenzira iri nyore kuwana kana uchigadzirira kutumira uye nyore kuisa painosvika kubva kumutengesi. Uye zvese izvi kutora nzvimbo diki sezvazvinogona. Nekuti iyo yakawanda nzvimbo iwe yaunoda, iyo yakawanda mari yekuchengetedza mari, zviri nyore kudaro.
Ndosaka zvichikosha kuve nemakabati uye masherufu anofambisa basa, pamwe nemidziyo inodiwa kuita iyo chigadzirwa kufamba. Usatonge kunze kwekutengwa kwe wardrobes online zvebhizimusi rako
1 Kudonhedza iri mhinduro inoshanda yekugadzirisa zvinhu?
2 Stock manejimendi uye pesvedzero yayo pane online vatengi kugutsikana
Kudonhedza iri mhinduro inoshanda yekugadzirisa zvinhu?
El dropshipping yakabuda seimwe nzira yekuyera gadzirisa zvigadzirwa zvekugadzirisa matambudziko uye kuunganidza mumatura. Mune dzidziso, iri mhinduro inogona kuve inonakidza, asi sezvo e-commerce musika iri kuwana, iyi sarudzo iri kutanga kusava nemubvunzo kubva mune yehupfumi maonero.
Ehe, tinobvumirana kuti iwe chengetedza rese basa ra kuchengetedza uye stock stock, asi mutengo wezvigadzirwa unowanzo kupihwa nenzira iyi uri kushoma uye kushoma kukwikwidza. Chimwe chinhu ndechekuti iwe unobvumirana nemupi wako uye womutora kuti ashandire chigadzirwa chako. Nekudaro, iwe unorasikirwa neese vhoriyamu dhisikaundi iwe yaunogona kuwana, saka tinouya kune imwecheteyo poindi.
Stock manejimendi uye pesvedzero yayo pane online vatengi kugutsikana
Iyo yekuchengetera zvinhu inofanirwa kutariswa kuzadzikisa chinangwa chechokwadi chekutengesa: iyo kugutsikana and the mutengi kuvimbika. Iyo yakanaka stock manejimendi system inokutendera iwe kuti uve nekukurumidza uye nekushanda kana uchishumira pamhepo maodha uye chengetedza mutengo. Inogona kunge iri mari hombe pakutanga, asi yakakosha, nekuti mune yepakati term inovandudza kugona uye inochengetedza pamhinduro dzechinguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Logistics » Warehouse » Kugadziriswa kwekuchengetedza sechinhu chakakomba muCommerce
Dmt zvigadzirwa akadaro
Logistics yekuchengetedza seyakakosha pokutangira yekugovera zvigadzirwa.
Pindura Logistics Dmt
Nyaradzo Pamhepo akadaro
Kune iwo mawebhusaiti, kuchengetedzwa uye kugoverwa kwezvigadzirwa kunonetsa, kunyanya kana zvinhu zvichapihwa zvakakura senzvimbo yedu.
Isu tinotengesa masofa, machisi emachira, masofa akapetwa, mamatiresi ekupupa furo, nezvimwewo, izvo, sekuziva kwako, zvine huwandu hukuru uye kwete matura ese akagadzirirwa kuchengetwa kwezvinhu izvi, saka isu takasarudza kugadzira kuitira kuti izvi zvive vakatengesa zvinhu kunyangwe izvi zvichinonoka kuendeswa nemazuva mashoma.
Pindura kune Nyaradzo Pamhepo